Shenzhen Ariza Electronic Co., Ltd naorina tamin'ny taona 2009 sy ny orinasa ao Shenzhen. With10 taona maro ny fampandrosoana, avy any OEM ho any ODM, dia mandoa bebe kokoa ny saina ho fampandrosoana ny vokatra vaovao, malaza isan-karazany natao modely amin'ny Ariza lafin-javatra sy manana ny Patents, ireo rehetra ireo dia tena modely nankatoavin'ny ny mpanjifa ao amin'ny firenena rehetra.
O Ora asa fitoriana dia hanampy ny olona rehetra hiaina fiainana azo antoka. Tsy manome tsara indrindra-in-kilasy manokana fiarovana, an-trano fiarovana, ary ny fampiharana ny lalàna vokatra mba hahabetsaka ny toerana azo antoka. Miezaka isika ny hampianatra sy hanome hery ny mpanjifa - ka dia, na teo aza ny loza, ianao sy ireo olon-tianao dia tsy vitan'ny hoe miaraka amin'ny fitaovana matanjaka vokatra, fa ny fahalalana ihany koa. Mino isika fa ny olona rehetra dia tokony harovana mba hahafahan'izy ireo miaina azo antoka, ara-pahasalamana fiainana amin'ny fiadanan-tsaina.
A riza dia nanao hitandrina ny avo lenta ny vokatra ary manome asa fanompoana tonga lafatra sy ny vahaolana, mba ho foana afaka hitsena ny mpanjifa ny zavatra ilain'ny. Manome bebe kokoa ho an'ny fanompoana mety, Ariza efa nampiditra vaovao isan-karazany sy ny B2C B2B fomba varotra. Noho ny zava-baovao mitohy sy ny fikatsahana ny lavorary, Ariza no manana matihanina Quality Management System nanomboka naorina. Efa tonga soa aman-tsara ny taratasy fanamarinana ny ISO9001 AK RoHS FCC SGS.